हामी उपचारमात्र होइन, बिरामीलाई जिउने कला पनि सिकाउँछौंः डा. विशाल | NewsKarobar
गृहपृष्ठ हामी उपचारमात्र होइन, बिरामीलाई जिउने कला पनि सिकाउँछौंः डा. विशाल
हामी उपचारमात्र होइन, बिरामीलाई जिउने कला पनि सिकाउँछौंः डा. विशाल
पूर्वीय चिकित्सा पद्धतिको इतिहास पाँच हजार वर्ष पुरानो छ । मानवजातिको उत्पत्तिसँगै स्वास्थ्योपचारको निर्विकल्प माध्यमका रुपमा पूर्वीय चिकित्सा पद्धतिको विकास भएको हो । प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति पूर्वीय चिकित्साको मुख्य अंग हो । यो जडिबुटीको प्रयोग तथा अनुभवबाट विकसित पद्धति हो । पूर्वीय चिकित्सा पद्धति र प्राकृतिक चिकित्साका विषयमा ब्लु लोटस अस्पताका चिकित्सक डा. विशाल श्रेष्ठसँग न्युजकारोबारकर्मी सञ्जय श्रेष्ठले गरेको कुराकानीः
– प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिबारे प्रस्ट पारिदिनुस् न ?
प्राकृतिक उपचार पद्धति भनेको पूर्वीय चिकित्सा पद्धतिमा आधारित उपचार विधि हो । हामी समयक्रमसँगै प्राकृतिक जीवनबाट धेरै टाढा पुगिसकेका छौं । परिणामतः हामीमा धेरै किसिमका स्वास्थ्य समस्या देखिन थालेका छन् । हाम्रो आहारविहार र व्यवहार नियन्त्रणबाहिर छ । हाम्रो जीवनशैली नै हाम्रो स्वास्थ्यमा समस्या आउने मुख्य कारक हो । प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिले मानवलाई प्रकृतिसँग जोड्ने अर्थात् नजिक्याउन सहयोग पु¥याउँछ ।
– ब्लु लोटस हस्पिटल कस्तो हस्पिटल हो ?
ब्लुलोटस हस्पिटल पूर्वीय चिकित्सामा आधारित अस्पताल हो । यहाँ हामीले पूर्वीय चिकित्सामा पर्ने धेरै चिकित्सा पद्धति जस्तै आयुर्वेद, अकुपञ्चर, पञ्चकर्म, फिजियोथेरापी जस्ता उपचार विधिको समयानुकूल प्रयोग गर्दै वैज्ञानिक तरिकाले बिरामीको उपचार गर्छौं । हामी विशेषतः नसर्ने रोग र त्यसमा पनि दुखाइसम्बन्धी उपचारलाई प्राथमिकता दिन्छौं ।
– ब्लु लोटस हस्पिटलमा कस्ता किसिमको बिरामीको उपचार गरिन्छ ?
ब्लु लोटस हस्पिटलमा खासगरी नसर्ने रोग हाड जोर्नी, नसारोग, ढाड दुख्ने, कम्मर दुख्ने, घुँडाको जोर्नी दुख्ने, माइग्रेन, पिसाप पोल्ने, गर्दन दुख्ने, कम्मर तथा गर्दनमा नसा च्यापिएको, प्यारालाइसिस, टाउको दुख्ने, पिनासलगायतका बिरामीको उपचार गरिन्छ ।
–अकुपङ्चर कस्तो उपचार पद्धति हो ?
अकुपङ्चर भनेको उपचारको पूर्वीय चिकित्सा विधि हो । यो उपचार विधि ढुंगे युगदेखि नै प्रचलनमा रहेका तथ्यहरु छन् । हाम्रो शरीरमा रहेका अकुप्वाइन्ट अर्थात् छालामा रहेका मसिना प्वालहरुमा स्टिललेस स्टिलपिन छिराएर कोषहरुलाई उत्तेजित गराउने पद्धतिलाई अकुपङ्चर भनिन्छ । अकुपङ्चर पद्धतिबाट उपचार गर्दा निष्क्रिय कोषहरु सक्रिय हुन्छन् र बिरामीले लाभ पाउँछ । डब्लूएचओले मान्यता दिइसकेको यो पद्धतिबाट उपचार गर्दा कुनै साइड इफेक्ट पनि हुँदैन ।
– चीनबाट सुरु भएको अकुपङ्चर विधिबाट नेपालमा कहिलेदेखि उपचार सुरु भएको हो ?
नेपालमा अकुपङ्चर विधिको प्रयोगको इतिहास खासै लामो छैन । कोदारी राजमार्ग बनेपछि चिनियाँ अकुपङ्चर विशेषज्ञहरुले नेपालको सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई यो विधिबाट उपचार गरेको तथ्यहरु भेटिन्छ । संस्थागत रुपमा चाहिँ हामीले २० वर्षअघि नेपालमा अकुपङ्चर एसोसिएन नेपाल दर्ता गरी यस विधिबाट उपचार सुरु गरेका हौं । हाल विभिन्न अस्पताल तथा क्लिनिक पनि अकुपङ्चर उपचार विधिको प्रयोग गरिरहेका छन् ।
– पञ्चकर्म उपचार विधिबारे बताइदिनुस् न ?
पञ्चकर्म उपचार विधि भनेको आयुर्वेदको एउटा महत्वपूर्ण उपचार विधि हो । यसमा हामीले पाँचवटा कर्म जस्तैः वमन, बिरेचनहरु गराउँछौं । यो पद्धति भनेको शरीरलाई शुद्ध गर्ने पद्धति हो । पञ्चकर्म कुनै पनि मानिसले गर्न सक्छ । यो पद्धति भनेको बिरामी भएपछि उपचार गर्ने पद्धति होइन । यो हामीले हाम्रो सवारी साधनको सर्भिसिङ गरेजस्तै बेला–बेलामा विभिन्न संक्रमण तथा रोगबाट बच्नका लागि गरिने उपचार विधि हो ।
– ब्लु लोटस र अन्य अस्पतालको उपचारमा के फरक छ ?
धेरै नै फरक छ । पहिलो कुरा हामी नसर्ने रोग त्यसमा पनि दुखाइसम्बन्धी उपचार गर्छौं । दोस्रो, हामीले गर्ने उपचार पद्धति र त्यहाँ हुने उपचार पद्धतिमा नै फरक छ । हामी कुनै पनि रोगको शल्यक्रिया गर्दैनौं । हामी पूर्वीय चिकित्सामा आधारित उपचार पद्धतिबाट उपचार गर्छौं । हामीले गर्ने उपचारबाट कुनै साइड इफेक्ट हुँदैन । हामी उपचारमात्र होइन, बिरामीलाई जीवन जिउने तरिका पनि सिकाउँछौं ।
पछिल्लाे - विद्युत प्रसारण प्रणालीमा हावाहुरीको बितण्डा, तीन सय बढी ट्रान्सफर्मर क्षतिग्रस्त
अघिल्लाे - मुक्तिनाथ विकास बैंकको सीईओमा प्रद्युमन पोखरेल